Indlu esemaphandleni enomtsalane yaseNorway - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni enomtsalane yaseNorway
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguSigmund
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uSigmund iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
INKCAZELO ENTSHA NGECORONA: Ngaphambi kokuba ubhukishe le ndlu yamaplanga, nceda uqinisekise ukuba uvumelekile ukuya eNorway ungakhange uhlale wedwa.
Unokuqesha le ndlu yamaplanga inomtsalane neqhelekileyo yaseNorway engaselunxwemeni lweTokevannet eTelemark kweli hlobo. Inolwandle lwayo labucala, i-pier kunye nesikhephe esinemoto. Ityeya enkulu yenza kubekho uxolo lwengqondo kusasa nasebusuku ibe kukho ilanga elininzi, kufutshane nendalo kuzo zonke iindawo ezipholileyo.
Inonxweme lwayo olude kunye neziqithi ezinkulu nezincinci kunye nemitshato, iLake Toke yindawo yakudala yabantu abahamba ngesikhephe neengelosi. Uza kuba nolwandle lwakho. Kukho ii-trout ezininzi, i-roe, i-whitefish kunye ne-perch, kunye nezinye izilwanyana ezifana needada kunye neembotyi. Kwindlu yamaplanga, isikhephe kunye nemoto zisetyenziswa simahla.
Indlu esemaphandleni inegumbi lokulala elinye elinebhedi elala abantu ababini, namagumbi okulala amancinci amabini kwigumbi eliseluphahleni kunye neebhedi ezimbini ezilala umntu omnye. Inetreyini, i-veranda, ikhitshi elincinci negumbi lokuhlala elinendawo yokubasa umlilo.
Indlu yamaplanga ine-TV enamajelo e-TV ayi-20 kunye ne-40 mbit internet line kunye NEWIFI.
Kumgama okulula ukuwuhamba ngemoto yindawo ephakathi ePrestestranda, kunye neevenkile kunye nevenkile yotywala. Malunga nemizuzu eyi-90 ukusuka kwipaki yokuzonwabisa yamanzi eSommarland eBø. Malunga nemizuzu engama-40 ukusuka apho kukho idolophu yaseKragerø kunye nonxweme oluhle olusemazantsi eNorway.
Indlu yamaplanga inombane, kodwa kungekhona amanzi. Iziselo zamanzi okusela ziyafumaneka kwindlu yamaplanga ibe zinokuzaliswa simahla kwisikhululo segesi esikufutshane. Ukupaka kufutshane nendlu esemaphandleni. Indlu yangasese elula kwisakhiwo esahlukileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Sigmund
Ndiza kufumaneka ngefowuni okanye nge-airband ukuze ndiphendule nayiphi na imibuzo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Drangedal